माटोबिनाको तरकारी खेती
माटोबिनाको तरकारी खेती कत्तिको सम्भव होला ? माटोको प्रयोगबिना तरकारी उब्जाउ हुन्छ भन्ने कुरा सुन्दा पत्याउन पनि गा¥हो । सुन्दै अचम्मलाग्दो माटोबिनाको खेती भनेपछि पानीमा गर्ने हो कि हावामा पो गर्ने हो ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो ।
स्थानीय सरकार : बलियो कि सजिलो ?
नेपालमा अहिले तीन तहको शासन व्यवस्था छ, जसमा ७ सय ५३ स्थानीय, ७ प्रदेश र १ संघीय सरकार गरी कुल ७ सय ६१ सरकार सञ्चालनमा आएका छन् । यी सरकारमा ३५ हजार ९ सय २७ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् भने हजारौं कर्मचारी कार्यरत छन्, जुन नेपाली नागरिकले भोगेका समस्या समाधानका लागि हो ।
संसद्को बर्खे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस भएपछि आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट र आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेर अर्थतन्त्रको हरेक पक्षमा खारिएका व्यक्ति अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा आगामी बजेट तथा अर्थनीति विगतको भन्दा फरक, यथार्थपरक र विद्यमान समस्याहरूको समाधानमुखी हुने अपेक्षा रहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण आजको आवश्यकता
नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा नेपालको बैंकिड क्षेत्रको भूमिका पनि अतुलनीय मानिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्ना सबै ग्राहकको विवरण यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा केद्रीय बैंकलाई जानकारी गराउन भनेको छ ।
बजेट निर्माणका आधारहरू
आगामी वैशाख २३ गते संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ, जुन अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनसमेत भनिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ को उपधारा (३) ले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले संघीय शासन–व्यवस्थाबमोजिम आय र व्ययको विवरणलाई सम्बोधन गर्दैछ ।
मध्यस्थता ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन
कुनै पनि करारसम्बन्धी विवादमा छिटो–छरितो र कम खर्चिलो ढंगले समाधान खोज्ने उत्तम उपाय हो— मध्यस्थता । विकास–निर्माणलगायत हरेक किसिमका आर्थिक तथा व्यापारिक क्रियाकलापहरूमा विवाद आउनासाथ यो माध्यम उपयोगी मानिएको छ ।
स्थानीय तह भर्सेस जिसस
एउटै निर्वाचन प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिबीच शीतयुद्ध सुरु भएको छ । गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका एकखाले प्रतिनिधि संविधानमुताबिकको जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) तर्फ अघि बढे । जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । यही सभाले जिससको निर्वाचन गरेको हो ।
आर्थिक समृद्धिको सुल्टो यात्रा
आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूको सूचीमा उपल्लो स्थानमा पर्ने देशहरूमध्ये नेपालको नाम पढ्दा कुनचाहिँ नेपालीलाई पीडाको अनुभूति नहोला ।
संघीयतामा योजना आयोगको पुनर्गठन
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन तहको निर्वाचन र सरकारहरूको निर्माण भई नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेबमोजिम स्वाधीन, सम्मुन्नत तथा समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थामार्फत समृद्ध संघीय गणतन्त्र नेपालको निर्माणको महान् यात्रामा देश अगाडि बढेको छ ।
वातावरण संरक्षणका चुनौती
विश्वमा वातावरणीय समस्या एउटा गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध राख्ने वातावरण दिनहुँ बिग्रदै जानाले मानवको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । एकातर्फ विश्वको जनसंख्या प्रत्येक वर्ष करोडौंको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ भने अर्कातर्फ आफ्नो दैनिक जीवनयापनका लागि वातावरणमा नै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सुशासनका लागि अनुशासन
सुशासन कानुनी शासनको द्योतक हो । सुशासन, समावेशी र समृद्ध नेपाल मात्र नयाँ नेपाल हो । जहाँ हरेक कामकारबाही पारदर्शी हुन्छन्, सबैको सहभागिता हुन्छ, ऐन–नियमहरूको परिपालना हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
तथ्यांकमा नदेखिएको समृद्धि
नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो पटक अत्यधिक प्रयोग भएको शब्द हो समृद्धि । यो शब्दलाई सबैभन्दा बढी अहिलेको सरकारले प्रयोगमा ल्याएको छ । त्यसमा पनि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन केपी शर्मा ओलीले यसलाई हरेक भाषण, भेटघाट तथा कुराकानीमा प्रयोग गर्छन्, मानौं ओली आज समृद्धिका पर्यायवाची शब्द भएका छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खरै चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि अनुमानित राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक जारी गरेको छ । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले आर्थिक वृद्धिको मात्र सूचना दिँदैन, समग्रमा मुलुकको उत्पादन, उपभोग, बचत र लगानीका विवरण पनि उपलब्ध गराउँछ ।
खानेपानीमा डिप बोरिङ प्रविधि
जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्ति तथा प्रकोपले बर्सेनि नेपालमा पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन् । वर्षायातमा समेत खानेपानीको समस्या हुने गर्छ भने झन् हिउँदमा त नहुने कुरै भएन ।